Dating soso-kevitra. Iza no tokony handoa?.
amin'ny Evan Marc Katz
Iza Pays amin'ny A Date Voalohany?
Last nohavaozina: Sep. 12 2019 | 3 min namaky
Aza atao hoe “Siramamy”
Taona vitsy lasa izay, Dia niara-nivoaka tamin'i vehivavy intelo isan-tapa-bolana. Karama nihazona izany andraikitra izany aho ny zava-drehetra, anisan'izany ny am-polony bagels indray Alahady maraina izy rehefa tonga saina izy nihazona izany andraikitra izany nanadino ny kitapom-batsy. Malala-tanana izy nanolo-kevitra ny haka ny daty manaraka.
Dia niantso ahy any am-piasana ny andro manaraka mba nambaranao tamiko fa nandre momba ny lalao izay naneno toy ny voly. Hoy izy hoe be atao izy ary nanontany raha toa ka afaka mamantatra raha misy tapakila misy. Tsisy olana. Nantsoiko ny teatra sy nianatra nisy sisa afa-tsy enina. Inona no Atao hoe lehilahy mba hanao? Tsy misy voka-, Nividy tapakila ny mpivady sy ny noeritreretintsika fa tiako izy naka sakafo hariva talohan'ny nivoaka.
Taorian'ny $40 sakafo, dia mametraka ny carte de crédit nidina ka nankany amin'ny efitra fandroana. Rehefa niverina izy, dia nahatsikaritra fa tsy nataony tao ny carte de crédit haka na namaky ny maso. Rehefa izay Nivandravandra ahy izy ka nanao hoe:, amin'ny iray taonina poizina fa tsy shred ny esoeso: 'Inona no I, ny siramamy Mama?!’
Eny, maha-lehilahy dia tsy mahafa-po foana ny tena zavatra eo amin'izao tontolo izao. Fa izay manao iany ianao? Manontany tena aho mikasika ny zavatra intsony ny “ara-drariny” ary nanapa-kevitra ny hanaiky ny rafitra nandova aho. Eto amin'ity tontolo ity, ny bandy mandoa tokoa, ary raha ny vehivavy iray dia manolotra ny vola, izy no tokony hiteny hoe tsia. Raha kely indrindra amin'ny daty vitsivitsy voalohany. Na izy raha mbola ny hoe Raiki-pitia. Na mety foana. Izany dia miankina amin'ny vehivavy. Afaka mahafantatra na oviana na oviana raha tsy nampidininy ny mpiambina sy namela azy haka ny maso. Ary ny dia, fa matetika ny fialan-tsiny diso aoriana loatra ny egalitarian fitondran-tena.
Izany dia quandary rehetra, ary tsy misy tsara amin'ny famaliana. Amin'ny maha-lehilahy izay teo amin'ny daty maro loatra, Dia nandre ireo tantara rehetra avy amin'ireo andaniny roa ary ny zoro. Fa satria tsy lojika toa mba be milalao ao amin'ny faritra ity, Iany aho hanome azy fotoana tarehiny sasany.
IZAY LAZAIN'NY OLONA:
Azy: Tokony te handoa ho ahy.
Eny, ary, ankapobeny, izany no. Ny hoe malala-tanana, indrindra fa ny olona iray izay miahy, dia tsy mampino ny fahatsapana – hatrany teo, Nolazaina aho fa, dia ny zava-drehetra amin'ny aloa fa amin'ny olon-kafa.
AZY: Dia manantena aho mba handoavana ny zava-drehetra.
Eny, ary izany ny silamo teo amin'ny lalana izay naorina talohan'ny nahaterahanareo. Aza miady izany, ataovy fotsiny miaraka amin'ny tsiky, mahatonga raha tsy, anareo dia tsy nahazo daty hafa.
Azy: Pandoany, indrindra am-piandohana.
Izany lojika dia kely dicier. Nahoana no ny olona handoa? Satria izany chivalrous? Mba eritrereto fa herim-po nanomboka tamin'ny fotoana niasa lehilahy sy vehivavy tsy. Vehivavy, ara-bakiteny, TSY afaka mandoa. Dia toy izany no, lehilahy maka ireo maso mipoipoitra amin'ny filàna, tsy avy amin'ny hatsaram-panahy. Dia efa nanomboka efa Hazavaina ho ny mari-pamantarana lehilahy, izay heverina ho tena mahantra ao amin'ny tsiro ny fanontaniana. Tsy manontany aho, fa hahita tezitra ianao fa aza aho nitondra azy?
AZY: Nanontany ahy izy hoe fa avy.
De maninona? Raha milaza fa ianao etiquette handoavana ny daty voalohany, ary manantena anao mba handoavana ny daty voalohany, ary manam-bola mba handoavana ny daty voalohany, dia mandoa ny manambitana daty voalohany.
Azy: Tsy mampaninona izay mahatonga. Ny lehilahy foana mandoa.
Raha misy lehilahy manao taonina ny vola, Afaka manome toky anareo aho, fa ny tena fifaliana sy fahafinaretana ho an'ny rehetra mba hiposaka ny zava-pisotro sy ny Spa farany fitsaboana ary mitondra anareo tahaka ny andriambavy isalasalana fa ianao no. Fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny maha mora vidy sy ny maha mahantra. Cheap dia midika hoe ny bandy mangataka ny daty hanaovana ilay trondro rehefa nandidy ny tsy lafo akoho. Mahantra dia midika fa ny bandy no olana raha manao hofan-trano izy mba handoavana ny dimy daty amin'ny iray volana. Ataovy ny tenanao eo amin'ny toerana: sarotra ny manome tsiny azy noho ny te Alternate taratasim-bola.
Ny vahaolana dia, tsy mahagaga, ny equivocation. Aoka ny rehetra miezaka mifankahazo. Ry zalahy, ho toy ny halala-tanana araka izay azo atao, tsy noho izy manantena anao, fa noho izany tena mahafa-po ny “ho ny bandy” ary ho mora kokoa aminy ny fiainana. Vehivavy, ho tsara fanahy ny mpianatra na ny mpampianatra grad izay tsy manana ny fitaovana mba ho toy ny chivalrous araka izay te ho. Mety tsy ho ny siramamy mamas, fa masìna ianao, aza maka izany ho namela ny ATM izahay ny, okay?